Khamiis 14 August 2020
Wicitaanka Dhageystaha: Ardayda ka qalin-jebisa Jaamacadaha Soomaaliya
Wicitaanka Dhageystaha: Dabbaal degga munaasabadda ciidda
Wicitaanka Dhageystaha: Shaatax iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka
Wicitaanka Dhageystaha: Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya
Wicitaanka Dhageystaha: Danjire Abuukar Daahir Cusmaan
Barnaamijka waxaa marti ku ah Abuukar Daahir Cusmaan (Abuukar Baalle) oo ah danjiraha Soomaaliya u fadhiya Xarunta Qm. Danjiraha ayaa ka jawaabi doona su’aalaha VOA iyo qaar ka mid ah dhageystayaasheeda.
Wicitaanka Dhageystaha: Aamina Cismaan Xaaji
Barnaamijka Wicitaanka Dhageystaha waxa uu todobaadkan ku saabsan yahay kiisaska kufsiga iyo tacaddiyada ka dhanka ah haweenka ee la soo warinayo in ay sii kordheen gudaha Soomaaliya, waxaana ku marti ah wasiirka arrimaha haweenka ee Puntland.
Wicitaanka Dhageystaha: Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir
Barnaamijka waxaa marti ku ah Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir oo ka mid ah culumada Soomaaliyeed, waxaana isaga oo jooga dalka Canada uu ka jawaabayaa su’aalaha VOA iyo qaar ka mid ah dhageystayaasheeda.
Wicitaanka Dhageystaha: Xil. Baashe Maxamed Muuse
Barnaamijka Wicitaanka Dhageystaha waxa uu todobaadkan ku saabsan yahay dhibaatada haysata qaar ka mid ah waalidka Soomaaliyeed ee ku nool dalal ka mid ah ah Yurub, kuwaasi oo eedo loo jeediyo darteed loogala wareego ubadkooda.
Barnaamijka Wicitaanka Dhageystaha waxaa marti ku ah Dr. Maxamuud Daahir oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud kana howl-gala gobolka Mennesota ee dalka Mareykanka.
Wicitaanka Dhageystaha: Dr. Maxamed Maxamuud Fuji
Barnaamijka Wicitaanka maanta waxaa marti ku ah Dr. Maxamed Maxamuud Cali Fuji oo ka tirsan guddiga la dagaallanka iyo xakameynta cudurka COVID-19 ee Soomaaliya. Dr. Fuji ayaa ka jawaabaya su’aalaha VOA iyo dhageystayaasha qaar ee ku saabsan kiisaska sii kordhaya ee Coronavirus ee Soomaaliya.
Barnaamijka Wicitaanka maanta waxaa marti ku ah Dr. Cali Maxamuud Xasan (Sheekh Cali Wajiis) oo ka tirsan hay'adda culimada Soomaaliyeed, isaga oo ka jawaabaya su'aalo ku saabsan sida Ramadanka sanadkani uga duwan yahay kuwii xiliyada caadiga ah